Funda ukuba uLuhlu lweNtengiso lweMini lunokuKwenza njani ukuba ube neNZUZO ephezulu Funda i-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kuThengiso lweSuku!
Ukuthengisa kwemini yinkqubo yokuthenga nokuthengisa iiasethi- ezinje ngeemali, amasheya, okanye izinto zorhwebo- ngembono yokwenza inzuzo kumaxabiso entengiso asoloko etshintsha. Ngamanye amagama, unethemba lokuthengisa iasethi ngaphezulu kokuhlawula kwangaphambili.
Xa kuthethwa oko, umxholo ogqithiseleyo wokuthengisa usuku kukuba awuyi kubambelela kwi-asethi ngaphezu komhla. Ngokuchasene noko, abathengisi banokugcina indawo evulekileyo kangangeeyure, okanye imizuzu. Kananjalo, inzuzo isekwe kumaxabiso amancinci kakhulu / anciphayo- rhoqo ngoncedo lomgangatho.
Udidekile? Sukuba-njengakwiKhokelo yesiFundo soRhwebo esi-2 soRhwebo ngoSuku, sikubonisa yonke into ekufuneka uyazi. Ngokuyifunda ngokupheleleyo, uya kuma elona thuba lilungileyo lokufumana umsebenzi wakho wosuku ngakwinqanaba lasekunene!
Qaphela: Uninzi lwabathengisi beentsuku ezintsha balahlekelwa yimali. Kungenxa yokuba abanakuqonda okuqinisekileyo ukuba isebenza njani indawo yokuthengisa ngemini-ngakumbi xa kufikwa ekufakweni kwezicwangciso ezinengqondo zokulawula umngcipheko.
Kwindlela yayo esisiseko, ukuthengisa kwemini kuyindlela yorhwebo ntengiso kunqabile ukuba abone umtyalomali agcine indawo evulekile ubusuku bonke. Endaweni yoko, urhwebo luhlala lusebenza ngenani lemizuzu okanye iiyure-kodwa azikho iintsuku. Oku kwahluke mpela kwimithombo yotyalo-mali yemveli efana nezitokhwe kunye neebhondi- ezithi zibone abatyali zimali bebambelele kwimpahla kangangeminyaka eliqela.
Ngenxa yoko, ubume bexesha elifutshane lokurhweba ngemini kuthetha ukuba abatyali mali baya kujolisa kwiinzuzo ezincinci kakhulu. Ngale nto ithethwayo, abathengisi bemini bahlala bebeka inqwaba, ukuba ayingo makhulu abathengisi mihla le-ke ezi zincinci zincinci zinokongeza ngokukhawuleza kumtyali mali onobuchule. Ngokubalulekileyo, bonke abathengisi bemihla- nokuba babeke isakhono okanye amava, baya kudibana nokuphulukana namashishini. Olu luhlobo nje lomdlalo.
Nangona kunjalo, abo benze ixesha elide kwaye benempumelelo ngokurhweba ngemini bayayazi indlela yokujongana neziphumo ebezingalindelekanga zokuphulukana nemali. Ngokuchasene noko, kulapho abathengisi be-newbie bahlala behluleka khona. Nangona kunjalo, ukwenzela ukuthengisa kwemihla ngemihla, kuya kufuneka usebenzise umthengisi we-intanethi olawulwayo. Ngokwenza njalo, uya kuba nokufikelela kumawaka ezixhobo zemali. Cinga kwimigca yeoyile, igolide, isitokhwe, ii-indices, ii-ETFs kunye nee-cryptocurrensets.
Nje ukuba ujolise kwi-asethi, kuya kufuneka uqikelele ukuba ucinga ukuba iya kunyuka okanye yehle ngexabiso- ngokunxulumene nexabiso langoku lemarike. Ukuba uqikelela ngokuchanekileyo, uya kwenza imali. Ukuba akwenzi njalo, ulahlekelwa yimali. Ngenxa yenani elipheleleyo lezorhwebo ezenziwa ngabatyali mali kwindawo yokuthengisa yosuku, wena kumele ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela yokufunda iitshathi, kunye nokutolika iindaba ezisisiseko.
Iinkonzo kunye neengozi zoThengiso lweSuku
Urhwebo ngamawaka eentengiso
Abarhwebi abaphumeleleyo benza isibonelelo sokuhlala ngokusisigxina
Amakhulu abarhwebi bemini abalawulwayo abanokukhetha kubo
Ukuqonda ukuThengiswa kweSuku- iziseko
Inkqubo yokurhweba ngemini ilula nje ukuba intloko yakho ijikeleze izinto. Ukunceda ukucoca inkungu, sidwelise uninzi lwezinto ekufuneka uziqonde ngaphambi kokuba uhlukane nemali yakho.
Thenga (Ixesha elide) vs Thengisa (Mfutshane)
Ukuba ngaphambili wawusebenzisa isitokhwe sakwaNtu, uya kwazi kuqala ukuba uza kufumana ukhetho olunye, kwaye ukhetho olunye kuphela xa uthenga izabelo. Oko kukuthi, unokucinga kuphela kwixabiso lenkampani ehamba kuyo up. Ngamanye amagama, awuyi kuthenga izabelo kwi-IBM, iFord Motors, okanye iMicrosoft ukuba ucinga ukuba inkampani izakuhla ngexabiso!
Nangona kunjalo, kulapho ukurhweba ngemini kwahlukile, njengoko unokukhetha ukuba 'mfutshane'. Oku kuthetha ukuba uqikelela kwiasethi, okanye kwiqela leeasethi, ukwehla kwexabiso. Umzekelo, masithi ucinga ukuba ixabiso leoyile lisetelwe ukwehla kwiiyure ezizayo.
Ngokubeka i-odolo 'yokuthengisa' kwi-1,500 yeedola- ukwehla kweepesenti ezintlanu kumaxabiso exabiso kwinzuzo yeedola ezingama-5. Unako, ewe, uhambe 'ixesha elide' xa uthengisa ngemini. Oku kuthetha nje ukuba uqikelela kwixabiso leasethi elinyukayo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke iodolo 'yokuthenga'.
Ukurhweba kwexesha elifutshane
Okulandelayo, emva koko kuya kufuneka sijonge ixesha-lokurhweba ngemini. Njengoko besitshilo ngokufutshane ngaphambili, xa sityala imali esitokisini okanye kwiibhondi, sihlala sibambelele kwiasethi iminyaka eliqela. Oku kusivumela ukuba sibaleke ngaphandle kwamaza aguquguqukayo okuguquguquka kwemarike.
Nangona kunjalo, kwimeko yokuthengisa kwemini, abatyali mali bahlala bevule izithuba ngenani leeyure. Ngobunzima, kuya kuba yinto engaqhelekanga kakhulu ukuba umrhwebi wosuku agcine indawo evulekileyo ubusuku bonke.
IVolumu ephezulu, ukurhweba ngeniso ephantsi
Ukuqhubela phambili ukusuka kwicandelo elingentla, iyavakala into yokuba inzuzo izakuba ngumzuzu xa ubambe isikhundla esingaphantsi kosuku. Oku kunjalo ngakumbi xa kuthengiswa iiklasi ezinkulu zeeasethi ezinje ngee-stocks ezibhalwe yi-NYSE, ii-indices, igolide, ioyile, okanye igesi yendalo- njengoko amanqanaba okunyanzeleka ephantsi.
Umzekelo, masithi umrhwebi uthenga ukuthenga kwi-S & P 500 index. Ucinga ukuba isalathiso siya kuhamba kangakanani ngosuku olunye? Ngaphantsi kweemeko eziqhelekileyo, ukuguquka kwamaxabiso kunokugubungela uluhlu lwe-0.5-2%.
Ngenxa yoku, abanye abathengisi ngemini baya kubeka uninzi lwezorhwebo ngosuku. Ayisiyiyo le nto kuphela ekujolise kuyo kwinzuzo encinci, kodwa nasekuqinisekiseni ukuba urhwebo oluninzi luya kuphulukana nolo. Njengoko sigubungela iinkcukacha ezithe kratya ezantsi, abathengisi bemini baya kuhlala besebenzisa amandla okwenza inzuzo.
Ukuthengisa kwemini: Zeziphi iiasethi endinokuzithengisa?
Xa kuziwa kwii-asethi ezithile ezikhoyo xa kuthengiswa ngosuku, inani lezixhobo zemali likwi mawaka. Oku kuqinisekisa ukuba abathengisi bemini banoluhlu olubanzi kakhulu lweeasethi ekujolise kuzo nangaliphi na ixesha.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zezixhobo eziqhelekileyo ezithengiswayo kwindawo yokuthengisa yosuku.
Izabelo: Ukurhweba ngamasheya yenye yezona zinto zinengeniso kubathengisi bemini, njengoko ukungazinzi kuhlala kuphakame kakhulu kunesalathiso esibanzi njenge-S & P 500. Abarhwebi abakwi-Intanethi baya kukunika ukufikelela kwiimarike ezinkulu zesitokhwe njenge-NYSE, NASDAQ, LSE, kunye ne-TSE. Abanye baya kubamba iimarike ezingamanzi ezinjengezo ziseSingapore, eHong Kong, eCanada nase-Australia.
Ama Indices: I-indices zentengiso yesitokhwe zikuvumela ukuba urhwebe ngeemarike ezibanzi ngorhwebo olunye. Umzekelo, ngokuthengisa i-FTSE 100, unokuqikelela kwicala elizayo leenkampani ezili-100 ezikhulu ezidweliswe esidlangalaleni e-UK. Eminye imizekelo ibandakanya iDow Jones kunye neNASDAQ 100.
Iimveliso: Kwakhona, urhwebo lwempahla luyathandwa kakhulu kubathengisi bemini abanamaxesha. Oku kubandakanya isinyithi esinjengegolide kunye nesilivere, amandla anjengeoyile kunye negesi yendalo, kunye neemveliso zezolimo ezifana nengqolowa nombona. Iimarike zorhwebo zisebenza nge-24/7, kwaye zinika iimfumba zemali.
Ii-ETFs: Iimali ezithengiswa ngotshintshiselwano (ii-ETFs) zikuvumela ukuba uqikelele kwiasethi, okanye kwiqela leeasethi, ngaphandle kokuba uthathe ubunini. Njengexabiso le ETF Uya kunyuka usihla okwesibini ngesiseko sesibini, zingqina ukuba zithandwa kakhulu ngabarhwebi bemini.
Forex: Umzi mveliso wehlabathi we-forex uxelwe ukuba uququzelele ngaphezulu kwe- $ 5 yezigidi zezigidi zokurhweba ngemali mihla le. Kungenxa yoko le nto abathengisi bosuku baya kugxila ngokukodwa kwi-forex. Iimarike zisebenza ngokungayeki, kwaye ukuthengiswa kwemali akunakuba ngumcimbi.
Iimali zemali zedijithali: Iidijithali zemali ezinjengeBitcoin kunye Ethereum ngoku sisebenza kumabala emidlalo angamawaka ezigidi. Kananjalo, ngoku unokurhweba ngeemali zedijithali ezithandwayo ngokuchasene nedola yaseMelika. Qaphela, ii-cryptocurrensets zi-volatile kakhulu, ngenxa yoko zimela umngcipheko omkhulu, kunye nomvuzo ophezulu wotyalo-mali.
Kwelinye icala, kuyaphawuleka ukuba abathengisi bemini banokufikelela kumawaka ezixhobo zemali kwindawo enye yomthengisi. Nangona kunjalo, kungaphaya kwemimandla enokwenzeka ukuba abarhwebi babanga zonke izinto asethi iiklasi. Ngokuchasene noko, abathengisi abanamava baya kuthi badlulele kwelinye okanye ezimbini.
Le yeyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule njengomrhwebi we-newbie, njengoko niching phantsi izakuvumela ukuba ufumane ubungcali kwindawo oyikhethileyo yotyalo-mali. Umzekelo, masithi ngolunye usuku uthatha isigqibo sokurhweba ngeoyile, ngosuku olulandelayo i-S & P 500, emva koko udlulele kwii-cryptocurrensets. Kwiimeko ezininzi, esi sisicwangciso esiyintlekele, njengoko uya kuba yinto yayo yonke imisebenzi kunye nenkosi yezinye.
Ngamanye amagama, cinga ukuba kunokuba nempumelelo kangakanani endaweni yoko ukugxila kwinto enye yezemali- njenge-GBP / i-USD kwi-forex okanye ioyile ekrwada kumandla? Ungalichitha lonke ixesha lakho uphanda i-ins kunye nokuphuma kwesixhobo osikhethileyo, kwaye wenze isigqibo esiqinileyo malunga nokuba zeziphi iindlela iimarike ezinokuthi zihambe ngazo.
Umzekelo weHlabathi-weNtengiso yoSuku
Ke ngoku ukuba uyazi iziseko zokuthengisa ngemini, ngoku siza kujonga umzekelo wehlabathi lokwenyani. Ukugcina izinto zilula, siya kusebenzisa amanani asisiseko ukuze uqonde eyona migaqo iphambili yendlela ukuthengisa ngemini okusebenza ngayo.
Ing Ukuhamba ixesha elide
Ngokophando lwakho lobuchwephesha, ucinga ukuba ixabiso lesitokhwe sika-Facebook ngenxa yokunyuka kwiiyure ezizayo
Kananjalo, ubeke i-oda 'yokuthenga' kwixabiso lentengiso le- $ 129.00
Kwiiyure ezimbalwa kamva, ixabiso le-Facebook lenyuka laya kwi- $ 130.29
Oku kubonisa ukwanda nge-1%
Kwisibonda se- $ 500, inzuzo yakho iyonke yi- $ 5
Ukutshixa ngaphakathi kwinzuzo yakho, uvale urhwebo ngokubeka i-odolo 'yokuthengisa'
Njengoko ubona koku kungasentla, umrhwebi wosuku angonwaba kakhulu ngenzuzo yexesha elifutshane ye-1%, ngakumbi xa ucinga ukuba isikhundla sasivuliwe iiyure ezimbalwa. Ukubeka loo mbono, uninzi lweebhanki ezinkulu zaseMelika zisabhatala inzala eyi-0.1% ngonyaka!
Ngapha koko, kwaye njengoko sigubungela kungekudala-umrhwebi wosuku unokuthatha isigqibo sokusebenzisa amandla. Ukuba, umzekelo, babeka urhwebo olungentla ngenqanaba le-10x, inzuzo yomrhwebi wosuku iya kwandiswa ukusuka kwi- $ 5 ukuya kwi- $ 50.
🥇 Ukuhamba ngokufutshane
Ngokophando lwakho lobuchwephesha, ucinga ukuba amaxabiso esitokhwe seFord Motors ngenxa yokwehla kwiiyure ezizayo
Kananjalo, ubeka i-odolo 'yokuthengisa' kwixabiso lentengiso le- $ 5.50
Ixabiso lakho lilonke li- $ 3,000
Kwiiyure ezimbalwa kamva, ixabiso leFord Motors lehla laya kwi-5.30 yeedola
Oku kubonisa ukwehla kwe-3.63%
Kwisibonda se- $ 3,000, inzuzo yakho iyonke yi- $ 108.90
Ukutshixa-ngaphakathi kwinzuzo yakho, uvale urhwebo ngokubeka i-'othenga 'iodolo
Lo mzekelo ungasentla usibonisa ukuba umrhwebi wosuku angaphumelela njani ukusebenzisa iodolo emfutshane. Bavula urhwebo ngokubeka i-odolo 'yokuthengisa', kwaye bayivale ngokubeka i-oda 'yokuthenga'.
Kwimizekelo esiyinike yona ukuza kuthi ga ngoku, sicacisile ukuba abathengisi bemini babeka amashishini amabini ngokwe-odolo nganye. Ukuphinda wenze kwakhona - ukuba uhamba ixesha elide kwi-asethi, uvula ngokubeka i-oda yokuthenga, kwaye uvale ngomyalelo wokuthengisa. Ukuba ucutha iasethi, wenza okwahlukileyo.
Nangona le ngcamango ihlala iyinyani, abathengisi bemihla baya kunqabile, kwaye sithetha njalo nqabile, shiya iodolo ivulekile. Ngale nto, sithetha ukuba bafaka ii-odolo zokuphuma ukuze urhwebo lwabo luvale ngokuzenzekelayo. Emva kwayo yonke loo nto, abathengisi bemini abayi kuba nakho ukuhlala kwizixhobo zabo kangangeeyure zokugqibela belinde ukuvala iodolo ngesandla.
Oku kubaluleke ngakumbi xa ucinga ngenani elipheleleyo leodolo abathengisi bosuku bahlala kulo lonke usuku. Ngenxa yoko, abathengisi bemini baya kubeka zombini 'i-odolo yokuyeka ukulahleka' kunye 'nomyalelo wokuthatha inzuzo' ngaphambi kokwenza urhwebo olutsha.
Ukuyeka ukulahleka kwee-oda kufuneka kube yimfuneko encinci xa kuthengiswa ngosuku Bayakuvumela ukuba unciphise ilahleko yakho ngokuvala urhwebo xa iimarike zichasene nawe ngenani elithile.
Masithi ujonge ukuhamba ixesha elide kwi-Bitcoin / USD kwi-7,110 yeedola
Ucinga ukuba ixabiso liya kunyuka, kodwa ufuna ukukhusela i-bankroll yakho ngokufaka i-odolo yokuyeka ilahleko
Eyona nto ufuna ukuyilahla kurhwebo yi-2%
Ngamanye amagama, ukuba ixabiso leBitcoin / USD lihla nge-2% xa kuthelekiswa nexabiso langoku lentengiso le- $ 7,110- urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo
Oku kufikelela kwithontsi leedola ezili-142, ke siseta i-odolo yethu yokulahleka kwi-6,968 XNUMX yeedola
Nje ukuba uphumeze lo myalelo ungasentla, ayinamsebenzi ukuba iBitcoin / USD iyehla nge-3%, i-30%, okanye i-99% - ilahleko yakho iya kubanjelwa kwi-2% kuphela.
Qaphela: Ii-odolo zokuyeka ilahleko azikaze ziqinisekiswe nge-100%. Ngale nto, sithetha ukuba kwiimeko zentengiso ezingazinzanga, kukho ithuba lokuba i-odolo yakho yokulahleka kokuyeka ayizukufaniswa nomnye umrhwebi. Ukujongana nalo mngcipheko, unokufuna ukuthathela ingqalelo 'ukuqinisekiswa' komyalelo wokulahleka. Ngokwenza njalo, umrhwebi uya kuqinisekisa ukuba urhwebo lwakho luvaliwe kwixabiso elichaziweyo lokulahleka. Oku kuyakuxabisa kancinane kwimirhumo.
Ii-odolo zokuthatha inzuzo
Ke ngoku ekubeni uyazi ukuba kufuneka wenze ntoni ukunciphisa iilahleko zakho ngendlela ezenzekelayo, ngoku kufuneka ucinge ngeethagethi zakho zenzuzo. Oku kubaluleke kakhulu kwihlabathi lokurhweba kwemini, njengoko uhlala ufuna ukuba nesicwangciso sokuphuma engqondweni.
Umzekelo, ngelixa unokufuna ukunciphisa iilahleko zakho ukuya kwi-2%, unokufuna ukujolisa kumda wenzuzo we-5%. Nokuba yeyiphi na indlela, inkqubo isebenza ngokuchanekileyo ngendlela efanayo ne-stop-loss order, kodwa ngasemva.
Uya kubeka i-oda yokuthenga kwi-Bitcoin / USD kwi-7,110 yeedola
Usete i-odolo yakho yelahleko yokumisa kwi- $ 6,968- ethi ibe yilahleko ephezulu ye-2%
Ufuna ukujolisa ekuzuzeni i5% kolu rhwebo
Ukufezekisa oku, kufuneka iBitcoin / i-USD inyuke nge- $ 355.
Kananjalo, sifaka iodolo yethu yokuthatha inzuzo kwi $ 7,465
Njengoko ubona koku kungasentla, abathengisi bemini baya kugubungela zombini iziphumo ezinokubakho ngendlela ezenzekelayo. Ukuba izinto zihamba ngokucwangcisa, urhwebo luya kuvalwa kwinzuzo ngokusebenzisa umyalelo wokwenza inzuzo. Ukuba izinto azizukucwangciswa, i-odolo yokumisa ilahleko iya kuvala urhwebo ngelahleko.
Ngobunzima, le yindlela abathengisi bemini abakwazi ngayo ukubeka uninzi lweodolo nganye nganye kunye nemihla ngemihla. Ngale nto ithethwayo, kwezinye iimeko ayizukuchukunyiswa ingeniso-mali okanye i-odolo yokumisa ilahleko ukuba i-asethi ihlala ngaphakathi kwezi zigaba zibini.
Ukuba kunjalo, umrhwebi wosuku uya kudinga ukuthatha isigqibo sokuba avale urhwebo ekupheleni kosuku, okanye alushiye luvulekile ubusuku bonke. Ukuba bakhetha le yokugqibela, kuya kubakho iifizi zobusuku ngobusuku ziya kusebenza.
Ukuthengisa kwemihla ngemihla
Njengoko abathengisi bemini bajolise kwimida encinci yenzuzo encinci, uhlala ufuna ukubhalwa kwibhanki ebonakalayo ukwenza ukuba le nkqubo ifaneleke. Ngamanye amagama, ukwenza iipesenti ezi-2 ngosuku kwimali eseleyo engama-200 iya kukufumana nge-4 yeedola ngosuku. Ngenxa yoko, abanye abathengisi bosuku baya kusebenzisa amandla.
Kulabo abangaziyo, amandla okuvumela ukuba urhwebe ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Uboleka imali kwi-broker, emva koko ukonyuse ixabiso lakho lorhwebo. Ubungakanani buchazwa njengobuninzi- umzekelo, 2x, 3x, 4x, njalo njalo.
Nanku umzekelo wendlela yokurhweba esebenza ngayo:
Ufuna ukubeka iodolo yokuthenga kwioyile kwi $ 29 ngomgqomo
Une- $ 500 kuphela kwiakhawunti yakho yokuthengisa yosuku, uthenge ufuna ukurhweba nangaphezulu
Kananjalo, usebenzisa uxhathiso lwe-10x
Oku kuthetha ukuba iodolo yakho yokuthenga ngoku ixabisa i-5,000 yeedola, nangona uneedola ezingama-500 kuphela kwiakhawunti yakho
Emva kwemini, i-oyile inyuka nge-3%
Oku kuguqulela kwinzuzo eyi- $ 150
Ngokomzekelo ongentla, ubuya kwenza iipesenti ezi-3 kwi-bhalansi yakho eyi-500- eyi- $ 15 nje. Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo se-10x, oku kuphindaphindwe nge-10, ukuthatha inzuzo yakho yonke ukuya kwi-150.
Nangona kunjalo, urhwebo oluxhuzulisiweyo lunokuhamba ngokuchasene nawe, oko kuthetha ukuba eyakho ukulahleka ziyandiswa.
Ukuze siqonde ubungozi bokunyusa xa kuthengiswa ngemini, kufuneka kuqala sichaze ngokukhawuleza ukuba isebenza njani inkqubo yomda. Ukuncamathela kumzekelo ofanayo njengasentla, sikwazile ukurhweba nge-5,000 yeedola xa besebenzisa amandla e-10x, nangona besineedola ezingama-500 kuphela kwiakhawunti yethu.
Nje ukuba urhwebo lubekwe, loo $ 500 isuswe kwi-akhawunti yakho eseleyo, kwaye ibekwe kwiakhawunti yakho yomda. Ngokwemigaqo kaLayman, umda usebenza njengediphozithi engabuyiswayo kwimeko apho urhwebo luchasene nawe sisixa esithile. Ukuba iyenzeka, urhwebo lwakho luya 'kucinywa' -kuthetha ukuba ulahlekelwe ngumgama wakho wonke.
Ke malini urhwebo lwethu ekufuneka luye ezantsi ukuze siphulukane nomda wethu? Ewe, oku kuxhomekeke kubungakanani besicelo osisebenzisayo. Kwimeko yokuphakama kwi-10x, uya kuphulukana nomda wakho ukuba iimarike zihamba ngokuchasene nawe nge-10%. Kungenxa yokuba nge-10x, ubunyanzelekile ukuba ubeke i-10% kumda.
Komnye umzekelo, masithi usebenzise isilinganiselo se-5x. Oku kuyakuvumela urhwebo nge-2,500 500 yeedola kwi-20 yeebhalansi, oko kuthetha ukuba umda umi kuma-20%. Kananjalo, ukuba iimarike bezizakuhamba ngokuchasene nathi nge-500%, singaphulukana nemali yethu engama- $ XNUMX.
Imirhumo yoRhwebo lweentsuku kunye neeKhomishini
Ukuba ufuna ukurhweba ngemini, kuya kufuneka usebenzise umthengisi okwi-Intanethi. Njengabarhwebi bakwishishini lokwenza inzuzo, kuyakufuneka uhlawule umrhumo othile xa usenza urhwebo.
Oku kuza ngeendlela ezimbini eziphambili- sasaza kunye nekhomishini yorhwebo.
Ngeyona ndlela isisiseko, ukusasazeka ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso leasethi. Eyona nto ibekiweyo lixabiso lentengiso yokwenyani, kwaye yile nto iqinisekisa ukuba abathengisi baya kuhlala besenza imali.
Umahluko phakathi kokusasazeka uchazwe 'iipipi'xa kuthengiswa kwangaphambili nge-forex, kwaye' ngamanqaku 'nini ukusasaza ukubheja. Ngale nto ithethwayo, kulula ukuvavanya nje ukusasazeka ngokweepesenti, njengoko oku kusenza sazi ukuba siludinga kangakanani utyalo-mali lwethu ukuba lonyuke ngokulula nje
Ixabiso 'lokuthenga' kwisitokhwe seDisney yi- $ 106.00
Ixabiso 'lokuthengisa' kwisitokhwe seDisney yi- $ 106.50
Umahluko wepesenti phakathi kwamaxabiso amabini yi-0.47%
Ukuba uthenga isitokhwe seDisney, sihlawula i- $ 106.50, kodwa sinokuyithengisa kuphela nge- $ 106.00
Kananjalo, sidinga ixabiso leDisney ukuba lenyuke nge-0.47% ukuze nje siphule
Emva koko, yonke enye into ibalwa njengenzuzo
Njengoko ubona koku kungasentla, ngoko nangoko sisesichengeni xa ukuthengisa kwemini, njengoko ukusasazeka kuqinisekisa ukuba kufuneka senze inzuzo encinci ukuze sifike kwinqanaba lokuphumla. Ngokubalulekileyo, yiyo loo nto kufuneka ukhethe iqonga lokurhweba kwi-Intanethi elibonelela ngokusasazeka okuqinileyo. Emva kwayo yonke loo nto, ukubanzi ukusasazeka, kokukhona kuya kufuneka wenze iindleko zakho zokuqala!
Ngaphezulu kokusasazeka, wena kungenzeka Kufuneka uhlawule iikhomishini zorhwebo, nazo. Sithi 'amandla', njengoko inani labarhwebi lingabizi ziikhomishini zorhwebo konke konke, oko kuthetha ukuba kukusasazeka kuphela ekufuneka ukujongile.
Ukuba ikhomishini yorhwebo ihlawulisiwe kwimisebenzi yakho yosuku, ke oku kuya kusekelwa kubungakanani beodolo yakho. Umzekelo, ukuba umrhwebi uhlawulisa i-0.5%, kwaye ubeka i-oda yokuthenga exabisa i-700 yeedola- ke uya kuhlawula ikhomishini ye- $ 3.50.
Kuya kufuneka uphinde uhlawule ikhomishini xa usiya kuthengisa iasethi- ngexabiso lentengiso langoku. Umzekelo, ukuba iodolo yakho ngoku ixabisa i-800 yeedola, ke ikhomishini yakho ye-0.5% iya kuthi ifike kwi-4 yeedola.
AmaQonga amaNgcono kuRhwebo loSuku ngo-2021
Ke ngoku ukuba uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokuthengisa kwemini esebenza ngayo, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ukuba leliphi iqonga oceba ukulisebenzisa. Kukho ngokoqobo amakhulu amaqonga orhwebo asebenzayo kwisithuba se-intanethi. Inani elikhethiweyo lilungile, ezinye zilungile, kwaye uninzi lusezantsi kakhulu kwepar.
Unoko engqondweni, apha ngezantsi uzakufumana amaqonga ethu aphezulu aphezulu kurhwebo lwemini kwi2021. Qaphela, iqonga ngalinye kula alandelayo adweliswe kakhulu, abambe amawaka ezixhobo ezithengiswayo, kwaye wamkele iimfumba zeendlela zokuhlawula zemihla ngemihla.
Isishwankathelo, ukuthengisa kwemini ngumsebenzi onenzuzo kakhulu kwabanye, kodwa hayi uninzi. Ngale nto, sithetha ukuba uninzi lwabarhwebi abatsha abalahlekelwa yimali kwilinge lokuqala, njengoko bengaxhobanga ngezixhobo ezifunekayo zokuphumelela kwisithuba.
Ngale nto ithethwayo, sinethemba lokuba isikhokelo sethu sokugqibela sokurhweba siyisusile inkungu. Sigubungele yonke into ekufuneka siyazi malunga nomzi mveliso-siqinisekisa ukuba akukho litye lishiyekileyo lingaguqulwanga. Kananjalo, ngoku unethuba elihle lokufumana umsebenzi wakho wosuku ngakwinqanaba lasekunene.
Ukuqukumbela, sikwadwelisile iindawo zethu zokurhweba ngosuku ezintlanu ezikumgangatho ophezulu zika-2021. Zonke iingcebiso zethu esele ziphononongiwe ziyalawulwa, zinika iimfumba zezixhobo ezinokuthengiswa, kwaye zikuvumela ukuba ubeke imali ngokulula kwityala okanye kwikhadi letyala.
Kuthatha ixesha elingakanani abathengisi bemini ukugcina indawo ivulekile?
Kwiimeko ezininzi, abathengisi bemini bagcina indawo evulekileyo iiyure ezininzi. Ukuba umrhwebi uyakhwela, banokugcina indawo evulekileyo kwimizuzu embalwa!
Benza malini abathengisi bemini?
Akukho sayizi-yobungakanani-yonke impendulo kule nto, kuba zininzi kakhulu izinto eziguquguqukayo ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Umzekelo, iingeniso ziya kugqitywa kukuseta kwezakhono zabarhwebi, iziteyki, ubungakanani, kunye nenqanaba lokuphumelela.
Yintoni 'ukusasazeka' xa kuthengiswa ngosuku?
Ukusasazeka ngumahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso leasethi. Kwimigaqo yepesenti, kuya kufuneka wenze ubuncinci ukusasazeka ukuze nje uphule.
Ngaba ukuthengiswa kwemini kulawulwa?
Ewe, nokuba uyathengisa kwaye uyathengisa iiCFDs, okanye ubandakanyeka ekusasazeni iisayithi zokuthengisa ukubheja kufuneka kulawulwe. Bonke abathengisi esiye sabacebisa kweli phepha banelayisensi yimizimba efana neCCA (UK), iCySEC (iSipro), kunye neASIC (Australia).
Umda wokulinganisa umiselwe kwizinto ezintathu eziphambili; indawo okuyo, iasethi ethile, kunye nento ozimisele ukuyinika umrhwebi. Umzekelo, ukuba uhlala e-UK okanye kwi-European Union, isilinganiselo sifakwe kwi-30x kwiibini ezinkulu zemali, kunye ne-20x kubantwana nakwizinto ezingaqhelekanga. Ezantsi kwesikali zii-cryptocurrensets, apho umda uyi-2x kuphela.
Zeziphi iindlela zokuhlawula endinokuzisebenzisa ukurhweba ngemini?
Uninzi lwabarhwebi bemini likuvumela ukuba ubeke imali ngedebhithi okanye kwikhadi letyala, kunye neakhawunti yebhanki. Amanye amaqonga abonelela ngenkxaso kwii-wallets ezinjengePaypal.
Kwenzeka ntoni ukuba ndigcina isikhundla sivulekile ubusuku bonke xa kuthengiswa ngemini?
Uya kuhlawuliswa kwimirhumo yenkxaso-mali ubusuku bonke. Oku kubalulekile 'ngumdla' kwiingxowa mali ozibolekisileyo kumrhwebi. Kungenxa yeso sizathu le nto kufanelekile kurhwebo lwexeshana elifutshane, njengoko iifizi zemali ziya kuqala ukudibanisa.